Munaasibad loo qabtay Ciidanka Asluubta ee DFS ayaa ka dhacay Magaalada Muqdisho | maakhir.com
Munaasibad loo qabtay Ciidanka Asluubta ee DFS ayaa ka dhacay Magaalada Muqdisho
February 23, 2008 in Somalia
Muqdisho:-Munaasabad lagu maamuusayay 38-guuradii ka soo wareegatay Maalintii Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed la aas aasay ayaa manta lagu dhigay Xabsiga Magaalada Muqdisho,waxana joogay Masuuliyiin ka tirsan Dawlada Somaliya saraakiisha ciidamada qalabka siday iyo waliba marti sharf kale oo aad u fara badan.
Ugu horayn waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay Taliyaha ciidanka Asluubta Dawlada Somaliya Gen C/laahi Macalin Cali isaga oo aad uga sheekeeyay hawlihii ay soo qabteen ciidanka uu maanta hogaanka u hayaa, Taliyahaasi waxa uu sheegay inay maanta mudan tahay maalin xusuus mudan oo u baahan inay dhamaan qalbiga ku hayaan Munaasibadaasi sida wayn loo soo agaasimay.
Gen Macalin waxa kaloo uu sheegay inay Ciidanka Asluubta ee Dawlada Somaliya ay yihiin kuwa utub dhexaadka u ah Ciidamada Dawlada Somaliya arunkaasi ayuu waxa uu tusaale ugu soo qaatay sida fiican ee ay uga wayb qaataan soo celinta Nabada iyo iyaga oo gacanta ku dhiga dadka Ashax xumada ka wada Gudaha Dalka Somaliya.
Gen Macalin waxa uu farta ku fiiqay inay ciidanka Asluubtu xanaaneeyaan Carruur badan oo Agoon ah kuwaasi oo ku nool xeryo loo qoondeeyay arinkaasi markuu ka sheegay Goobtaasi ayaa waxa Sacab u tumay dhamana dadkii halkaasi joogay iyaga oo ku til maamay inay yihiin kuwa qabtay hawlo badan.
Waxa iyana mikrifoonka lagu soo dhaweeyay Wasiirka Haweenka iyo hormarinta Qoyska Murwo Khadiijo Maxamed Diiriye iyada oo ugu horayn u mahad celisay dhamaan dadkii goobtaasi ka soo xaadiray,waxay sheegtay in loo baahan yahay in la teegeero dhamaan qorshayaasha ay wadaan ciidamada dawlada Somaliya si looga guulaysto kuwa doonaya inay wiiqaan Nabad Dalka Somaliya.
“Waxaan ku dhiiri galinayaan dhamaan Gabdhaha Somaliyeed inay ku biiraan Ciidamada Dawlada Somaliya si ay uga qayb qaataan Soo celinta Nabad Dalka ma ah in la xishoodo ma aha in laga faano ku biirida Ciidanka e waa in lagu faanaan oo layska diiwaan galiyaan Xeryaha Ciidamada, Saasi waxa tiri Wasiirka Haweenka iyo Qoyska ee DFS.
Guntii iyo gaba gabadii waxa xafladaasi ka hadlay Raisalwasaaraha 1-waad ee Dawlada Somaliya ahna wasiirka Cadaalada iyo Diinta Prof Saalim Caliyaw Ibraw isaga oo sheegay inuu aad ugu farax san yahy qaabka hanaanka leh ee loo soo agaasimay Xafladaasi qiimaha Badan,waxa uu intaasi raaciyay in loo baahan yahay inay shacabka Somaliya ku taageeraan dhamaan Ciidamad qalabka sida ee Dalka Somaliya cid alaale cidii Maja xaabinayso Hanaanka Nabada ee Dalka Somaliya.
Si kastaba ha ahaatee waxay Xafladaasi ku soo dhamaatay jawi fiican iyada oo ay Amaanka Goobtaasi gaaf wareegayaan Ciidamada Dawlada Somaliya oo Garab ka helaya kuwa Dawlada Somaliya.
« Wakiilka Gaarka ah ee Q.M u qaabilsan Sonmaliya ayaa ka dayriyay xaalada Dalka Somaliya
Boqolaal Tahriibayaal ah aya soo gaadhay Magaalada Laasqoray ee Gobolka Sanaag »